musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » Chinese vafambi vakagadzirira uye vanoshushikana kubhururuka zvakare
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Vanopfuura hafu yevakabvunzurudzwa vakapindura vakati vakagadzirira kubuda mu mainland China kana miganhu yavhurwa, neSoutheast Asia iri nzvimbo yepamusoro yesarudzo, ichiteverwa neEurope, Australia / New Zealand neEast Asia.
Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevaChinese vafambi vatora nendege kubva kumavambo kweCVID-19 denda.
81 muzana yeongororo vakapindura vanoti vanoronga kubhururuka kamwe chete mukati memwedzi gumi nemiviri inotevera.
Kune avo vari kuronga kufamba, 73% ichaenda kunozorora, iine chete 24% inoronga nzendo dzebhizinesi.
Zvinoenderana neazvino indasitiri yekufambisa indasitiri, 96% yevafambi mu China vakagadzirira uye vari kuronga kufamba nendege munguva pfupi iri kutevera.
81% yevakabvunzurudzwa vakapindura vanoti vanoronga kubhururuka kamwe chete mukati memwedzi gumi nemiviri inotevera uye 12% inoronga kubhururuka nemukuvhuvhu uno.
Pakati peavo vari kuronga kufamba, 73% yakataura kuti yaive yekuvaraidza ne 24% chete vachironga kufamba kwebhizinesi.
Iyo pent-up kudiwa inoratidzwa zvakare mukati Chinatraffic yevatakuri, iri kuratidza zviratidzo zvekudzoka kwakasimba. Kubva munaGunyana 2021, China traffic yaive pa 87% yematanho e2019 - kumberi mberi kwevamwe veAsia (42%).
Ongororo iyi yakaratidza kuti zvikamu zviviri kubva muzvitatu (66%) zvevaChinese vanofamba vakatiza nendege kubva pakatanga denda iri. Iwo maratidziro data anoratidzira mafambiro epamba muQ4 inotarisirwa kupfuudza pre-denda mazinga, ichikura neimwe 15% ichienzaniswa neQ4 2019.
Kutevera mwedzi yezvirambidzo zvakakonzerwa neChina Zero-COVID mutemo, kuwedzera kudiwa kwekudzoka kukuru kune dzimwe nyika nedunhu kufamba kuri pachena.
Vanopfuura hafu (61%) yevakabvunzurudzwa vakapindura vakati vakagadzirira kubuda kunze kwenyika China kana kamwe miganhu yakavhurwa, neSoutheast Asia ichiva nzvimbo yepamusoro yesarudzo, ichiteverwa neEurope, Australia / New Zealand neEast Asia.